ထုတ်ကုန်ကိုပျက်စီးစေမလား။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ထုတ်ကုန်ကိုပျက်စီးစေမလား။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-10 မူလ:ဆိုက်ကို
လက်ရှိအချိန်တွင်သဘာဝကျောက်ကြမ်းပြင်များကိုပိုမိုတောက်ပစေပြီး, စိန်ဖြင့်သဘာပတိနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူပျံ့နှံ့ခြင်း, နည်းလမ်း (4) ခုသည် omnipotent မဟုတ်ဘဲကျောက်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သင့်တော်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်ရှိအချိန်တွင်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသောကိရိယာများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်သည်Blade Grinder စက်,လက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုကြိတ်စက်,လျှပ်စစ် Stone Grinderနောက် ... ပြီးတော့။
အမှုန့်နှင့်ဝင်းချုပ်၏ polishing ၏အလုပ်လုပ်နိူင်ငံရေးသည်လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သံဖြူအောက်ဆိုဒ်များ၏ကောင်းကျိုးများကိုပွတ်တိုက်ခြင်းများကိုထုထည်ကိုပွတ်တိုက်ပေးရန်ပွတ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပွတ်တိုက်ခြင်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည်စိန်နှင့်အတူ polishing နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအတော်လေးပြောရလျှင်အမှုန့်သည်ပွန်းစားခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင်ပုံဆောင်ခဲမှုနှင့်ဆင်တူသည့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်အောက်ဆီဂျင်အက်ဆစ်သို့မဟုတ် oxalate ကိုထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
၏နိယာမစိန်ကြိတ်ကျောက်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုတန်းစိန်များနှင့်အတူကျောက်မျက်နှာပြင်ကိုကြိတ်ရန်ဖြစ်သည်။ စက်မှုဇုန်စိန်များကိုများသောအားဖြင့်သုံးမှလေးလက်မအထိအခင်းများသို့မဟုတ် disk များဖြင့်ထုပ်ပိုးလေ့ရှိသည်။ Drive Board ၏အောက်ခြေရှိ discs သုံးခုမှခြောက်မှခြောက်ခုအထိကို Velcro နှင့်ပြင်ဆင်ပါ။ ပလပ်စတစ်ကိုမောင်းထုတ်ရန်အမြန်နှုန်း (175 RPM) ကြမ်းပြင်စက်ကို သုံး. ခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားရန်စိန်များဖြင့်ကျောက်မျက်နှာပြင်ကိုအရောင်တင်ပါ။ စက်မှုထွန်းတောက်မှုရရှိသောသည်အထိအသေးစိတ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိန် grit ဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်,စိန် polishing padsတစ် ဦး ထောက်ခံမှုအခန်းကဏ္ play ကစားပါ။
Crystallization သည်ကျောက်တုံးပေါ်တွင် flellosilicate ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး Slate ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမျက်မှန်အသစ်များပေါ်ရှိ Glassy Crystals အသစ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်သံမဏိသိုးမွှေးပါ0င်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Crystals ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အရောင်တင်ရန်လိုအပ်သောအပူနှင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်စံ 175 RPM Fall Machine Machine ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီအဆင့်မှာလက်ကျင်းပ policerနှင့်ပိုလန်စက် grindထို့အပြင်ကြမ်းပြင်၏ polishing အတွက်ကူညီရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
MOP, roller, lamb morning applice or protrayer သည်ဖယောင်း, acrylic, urethane သို့မဟုတ်အခြားပေါ်လီမာသို့မဟုတ်အခြားပေါ်လီမာအရည်သို့မဟုတ်တစ် semi-lift form ကိုကျောက်မျက်နှာပြင်သို့အသုံးပြုပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်ကြမ်းပြင်စက်များနှင့်အမျှင်သို့မဟုတ်ဝက်သို့မဟုတ်ဝက်ဆံပင် pads များသည်ဤစစ်ဆင်ရေးကိုပိုမိုပြီးမြောက်စေသည်။ ဤသည်အပေါ်ယံပိုင်းတွင် polishing ပုံစံကို porous ကျောက်တုံးများအတွက်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
အမှုန့်နှင့်ဒြပ်ပေါင်းများကို polishing အောက်ပါသိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအသွင်အပြင်မြင့်မားခြင်းနှင့်တောက်တောက်ပမှု၏အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အနိမ့်မြန်နှုန်းအလေးချိန်ကြမ်းပြင်စက်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Alumina ဖြင့်ရေးထားသောခြံဝဲလ်သည်ကြမ်းပြင်ကိုမဖျက်နိုင်ပါ။ အကယ်. အမှုန့်များတွင် oxalic acid သို့မဟုတ် oxalate ပါ0င်ပါကအသေးစားသည်အများအားဖြင့်အလယ်အလတ်ခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
အားနည်းချက်မှာအမှုန့်ရှိ oxalic acid သည်စကျင်ကျောက်နှင့်ထုံးကျောက်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသူကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
အားနည်းချက်ကအသွင်အပြင်သည်သဘာဝမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆေးသုတ်ဆေးအများစုသည်လျစ်လျူရှုသောကျောက်တုံးများကိုမလိုက်နာပါ။ ခြစ်ရာများနှင့်မှိုင်းခြင်းနှုန်းသည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးနေ့စဉ် polishing သို့မဟုတ် sanding လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးတောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်အကုန်အကျများသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ crystallization နည်းလမ်း၏အားသာချက်သည်မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစံနည်းသောအမြန်ကြမ်းပြင်စက်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်, မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမည်သည့်နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးပါစေအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိပါသည်။ ကျောက်ခင်းထားသောကိရိယာများကိုသိုလှောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော tools များပါဝင်သည်လျှပ်စစ် Rotary Hammer drilဌ,Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်နှင့်သတ္တုလက်ကြွေစက်.
Blade Grinder စက် လက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုကြိတ်စက် လျှပ်စစ် Stone Grinder စိန်ကြိတ်ကျောက် စိန် polishing pads လက်ကျင်းပ policer ပိုလန်စက် grind လျှပ်စစ် Rotary Hammer Drill သတ္တုလက်ကြွေစက်